Su'aal: Maxaa keeno gacmaha oo qabow noqdo?
Author Topic: Su'aal: Maxaa keeno gacmaha oo qabow noqdo? (Read 3533 times)
« on: May 23, 2015, 02:57:05 AM »
ASc. waan idin salamay marka hore Dr dhamaantiin.
su'aasheyda waxey tahay maxaa sababa gacmaha qeybtooda hore oo qabow saa'id ah aad ka dareemtid. iyadoo jirka intiisa kale oo caadi ah?
Re: Su'aal: Maxaa keeno gacmaha oo qabow noqdo?
« Reply #1 on: May 23, 2015, 04:32:27 PM »
Gacmaha qeybtooda hore maxaa ula jeeddaa? Calaacalaha ama Sacabada miyaa ka wadaa?
« Reply #2 on: June 06, 2015, 03:08:22 AM »
Haa waxaan ula jeeda Calaacasha, oo qabow badan qofku ka dareemo xili jirkisa intiisa kale ay caadi tahay?
« Reply #3 on: June 10, 2015, 12:40:59 AM »
Haddii dhibaato kale aadan qabin oo gacmaha oo qabow noqdo kaliya ay tahay, way sahlan tahay dhib weynne ma ahan, dadka qaarne maqaarkooda calaacalaha iyo midka cagta way ka jilicsan yihiin dadka kale oo uma dul qaadan karaan qabow yar.
Midda kale haddii aad tahay dadka badanaa cadaadiskooda dhiigga uu hooseyso ama uu dhaco waxay leeyihiin gacmo qabow.
Dadka calaacalaha badanaa ka dhidido iyagane waxay ka sheegtaan gacmo qabow.
Marka waxba haka walwalin insha'llah.
« Reply #4 on: June 15, 2015, 02:40:01 AM »
Aad u mahadsantihiin dhamaantiin Dhaqatirta iyo shaqada aad shacabka somaliyed u heysan.
Views: 43044 July 02, 2017, 11:30:43 AM
Views: 89777 January 06, 2015, 08:30:19 PM
Views: 46077 December 05, 2015, 01:19:38 PM
Views: 49247 April 06, 2016, 04:35:38 PM
Views: 20782 June 11, 2017, 12:22:58 PM